अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र ‘सयकडा दश’–प्रमुख आयुक्त| Nepal Pati
ललितपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले चलचित्र ‘सयकडा दश’लाई अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र भनेका छन् । आयुक्तले हिजो ललितपुरको पुलचोक स्थित क्युएफएक्स हलमा दर्शक माझ बसेर चलचित्र हेरेपछि ‘अख्तिायारको उद्देश्यलाई बोकेको चलचित्र’ रहेको बताएका छन् ।
उनले भने ‘चलचित्र सन्देश मुलक छ । म आशा विश्वास र अपेक्षा पनि के गर्छु भने यो चलचित्र हरेक नेपालीले हेर्नुपर्ने चलचित्र बनेको छ’, उनले अगाडि भने ‘अख्तियारको मुल मर्मलाई नै बोकेर चलचित्र बनेको लाग्यो मलाई । भ्रष्टाचारका विषयमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा मौन रहनु पनि छन् ठूलो भ्रष्टाचार हो । त्यो मौनतालाई चिर्ने काम यो चलचित्रले गरेको छ ।
चलचित्रलाई अख्तियार प्रमुख आयक्तसहित आयुक्त डा. सावित्री गुरुङ, विदुषी सपना माता लगायत बिभिन्न व्यक्तित्वहरुले हरेका थिए । आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले हसाउदै रमाइलो गराउदै महत्वपूर्ण संदेश दिएकोले निर्माण पक्ष र कलाकारलाई धन्यबाद दिइन । साथसाथै यो चलचित्र कुनै बर्ग बिशेषको लागि मात्र नभएर आम नेपालीले हेर्नु पर्नेमा जोड दिइन ।
यही माहोलमा ‘सयकडा दश’ हेर्न आफ्ना भक्तजनहरु सहित आएकी विदुषी सपना माताले चलचित्र अत्यन्तै मार्मिक भएको भएको भन्दै सबैलाई नछुटाउन अनुरोध गरिन । बेलुका ६ बजेको शो मा पनि दर्शकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको र अधिकांस दर्शकले राम्रो चलचित्र भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । सबैले चलचित्र सन्देश मुलकसहित मनोरञ्जनले भरपूर्ण रहेको भन्दै उक्त चलचित्र एकपटक हेर्नैपर्ने सुझाए । उनिहरुले ‘यसको सन्देश प्रभावशाली मात्रै छैन, सरकारलाई घच्घचाउने खालको समेत छ’ भनेका थिए ।